Nkpọrọ ụkwụ na ntan; Olee otú iji merie spam ịga nke ọma?
Spam bụ nsogbu gbasara ọtụtụ ndị ọrụ ịntanetị. A na-agbakarị, ozi ntanetị sindị na-enweghị ọchịchọ dịka phishing na hacking. Mgbasa ozi Spam nwere Mgbakwụnye, URL ma ọ bụ ntụziaka ndị ọzọ na-aga-ememee ka onye ahụ kpugheere ya ihe ọmụma bara uru nye spammer - it services industry in portland. Spam na-ewepụ ọtụtụ nde ebe nrụọrụ weebụ nakwa ọtụtụ ozi ndị ọzọ.Ọ bụla ahịa azụmahịa, onye ọrụ weebụ ma ọ bụ ịntanetị kwesịrị ịnọ na spam.
Ị nwere ike isi na spam na-eji ndụmọdụ na omume, nke Jack Miller nyere,Ndị Ọrụ Ndị Nlekọta Ahịa nke Ọkachamara ,dị ka:
Chebe adreesị ozi-e gị.
Onye na-agba chaa chaa gold bụ ndepụta nke adreesị email. Ọtụtụ spammers na-elekwasị anya n'ịchịkọtandepụta nke adreesị ozi-e nke ha na-eziga ozi ịntanetị spam. Ngwakọta nje spam nke na-abịa n'ụzọ dị otú a gụnyere ndị sitere na weebụsaịtị porn.Idebe nchekwa email gị nwere ike ịbụ ezi echiche. Maka ndị nwere mkpokọta weebụ ma ọ bụ ndị nwere ọrụ ntanetị siri ike, na-eke ọtụtụ emailakụkọ iji rụọ ọrụ dị iche iche nwere ike ịbụ echiche dị mma. N'ihi ya, ọtụtụ ihe mgbochi spam nwere ike naanị icheta otu email ọ bụghị ha niile.
Jiri nzacha spam.
E nwere ụfọdụ nzacha spam nke nwere ike ichebe igbe mbata gị site na ozi nke otuụdị ma ọ bụ onye na-eziga. Imirikiti usoro nlekọta ọdịnaya nwere nzacha spam nke nwere ike ichedo gị site na ozi-e spam nkịtị. Email dị ka Outlookna Gmail nwere nzacha spam nke nwere oke ogo ma ọ bụ n'efu. N'ihi ya, i nwere ike irite uru site na ngwa-egbochi spam ha.
Emela ihe gbasara spam.
Ndị Spammers nwere ike iji ụdị aghụghọ niile mee ka ị pịa njikọ na email ma ọ bụ ozi ha.Ụfọdụ n'ime ụzọ ndị nkịtị na-agụnye bọtịnụ nke na-egosiputa ozi dị ka "pịa ebe a iji wepu aha". Ịpị ihe ọ bụla na-akwado naspammer na adreesị email ahụ dị irè, onye ọrụ ahụ na-eji adreesị ozi-e. Ọzọkwa, ọ nwere ike ịnwe njikọ na ebe nrụọrụ weebụ na-emerụ ahụ,nke nwere ike ime ka onye ahụ na-adịghị ike.
Emeghela ihe mgbakwunye.
Ọ dịkwa mma ịmeghe ihe mgbakwunye dị na ozi-e spam. Njikọ ndị a nwere ikenwere nje dịka Trojans. Nke a malware na ikpuru na-elekwasị anya na ịmịnye kọmputa na kọmputa. Ha nwere ike ịnakọta ozi bara urudị ka ihe nchọgharị na-agafe okwu ma ọ bụ ọbụna ntan ọtụtụ kọmputa onwe onye. Mgbakwunye ọ bụla dị na ozi ịntanetị spam kwesịrị ịnọgide n'ebe ahụ. N'ọnọdụ ọ bụla, hichapụọ bụla ngwa ngwa spam ngwa ngwa.
Ọ bụrụ na ị zutere ozi-e ị na-ejide n'aka na ọ bụ spam, ị ga-akara ya dị ka spam. Nke anha na - eme ka ị keere òkè na mgbasa ozi nkwụsị nke spam, na - eme ka onyinye gị gụọ. N'ihi ya, bulie mkpu ahụ tutu ị gbapụnsogbu iji zọpụta onye ọzọ.
Spam na-aghọ akụkụ nke onye ọrụ ịntanetị kwa ụbọchị. Ọtụtụ ndị na-ada maka spam dị kaphishers ma ọ bụ ndị mmadụ na ozi-e nwere emails emetụta. N'ọtụtụ ọnọdụ, spammers lekwasịrị weebụsaịtị, admins, ma ọ bụ akaụntụ njikwa ebe hazoo data dị ka ozi kaadị ndị ahịa. Ịhapụ ịgafe spam dị mkpa. Ndị ọrụ nwere nkà dị mma iji zere spam. Ụfọdụ ntụziakana ụzọ kachasị mma iji zere spam bụ na nduzi a. Ọzọkwa, e nwere ụzọ ndị ọzọ kachasị mma esi emeso email spam. Ị pụghị ịda makaspam ebe ọ bụ na ị nwere ike ịmecha ihe mgbaru ọsọ gị na icheta.